Ngo inqubo ukukhiqizwa indwangu isihlungi cindezela, uthuli ngendwangu, uthuli izikhwama, ukuhlunga anezikhala indwangu, ukuhlunga cartridges, ukuhlunga i-polyester uboya, ukuhlunga ukotini kanye lemifanekiso isici, Golden Laser wafohla bottleneck ka ahlabayo isihlungi impahla, isibhakela, ilungiswe nezinye bendabuko izinqubo.
Kunconywe Laser Systems
Dye Sublimation Imboni
GOLDEN kokubuka Laser Cutting Machine automates inqubo ngokunciphisa Indwangu ephrintiwe ngokushesha nangokuqondile, ngokuzenzakalelayo uyamelana iyiphi Ukuhlanekezelwa futhi elula ezenzeka imiqulu engazinzile yendwangu.
Digital Elanyatheliswa Ilebula Imboni
ilebula laser ohlelweni die ahlabayo GOLDEN laser uyisicelo esiqondile welebuli aliqede, kuyinto okusemgqeni laser cutting ubuchwepheshe oguqula umsebenzi iDemo naphakathi siphela enokwethenjelwa futhi kahle, sikwazi ukucubungula lonke ukuqhutshwa komsebenzi ngedijithali.
Isikhumba & Shoe Imboni
Golden Laser lesikhumba & izicathulo izixazululo, ifakwe ngokunemba high uhlelo lokulawula ezinyakazayo, ukuhlanganisa iphethini digitalizing, grading kanye smart lokushutheka nezinye imisebenzi kanye olungenakuqhathaniswa laser ubuchwepheshe esikhundleni ezivamile ngethuluzi lokusika ...
Ingubo ekuhlanganiseni Imboni
Golden Laser ingubo evumelanisa umkhakha izixazululo ngokuyinhloko zenzelwe ukukhiqizwa encane batch, ukuzisika olulodwa futhi evumelanisa, isampula indwangu evumelanisa, kanye ngesivinini wenza i-isilinganiso isembatho evumelanisa ...
Ngo ukusika futhi isibhakela ka-airbag, Golden Laser ukusika uhlelo kunezinzuzo sobala uma kuqhathaniswa ne awayindwayo die-osezingeni uhlelo. Laser ukucutshungulwa isebenzisa ezishisayo processing indlela. Akukho fraying indaba.
Ikhaya Textile Imboni
Ngo ikhaya yendwangu umkhakha, Golden Laser izixazululo has iminyaka eziwusizo. Golden Laser eziklanyelwe ezinkulu-format high-speed cutting & umshini oqoshiwe. Lingenza ikhaya yendwangu izindwangu yokwehlisa kanye esibukweni isithombe lace yokwehlisa kanye isibhakela ..
Ufuna ukuthola okwengeziwe? Thintana nathi for lesisho!
GOLDEN laser inikeza laser izixazululo anhlobonhlobo umkhakha isicelo.
Ugcwalise elingenalutho Ngezansi